२४ घण्टा नवित्दै ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’ विभिन्न देशमा ट्रेण्डिङमा ! हेर्नुहोस् भिडियो ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
२४ घण्टा नवित्दै ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’ विभिन्न देशमा ट्रेण्डिङमा ! हेर्नुहोस् भिडियो !
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । मंसिर २७ बिहीबार, हिजो टंक बुढाथोकीको गीत ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’ गीतको सार्वजनिक भएसँगै नेपाल ट्रेन्डिङको नम्बर ५ मा पर्न सफल भएको छ । प्राय गीत सार्वजनिक भएको २४ घन्टा पछि मात्र ट्रेन्डिङमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यदि पर्यो भने पनि चलचित्रका गीतले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । तर यो गीतले २२ घण्टामा नै विश्वका धेरै देशमा ट्रेण्डिङमा पर्न सफल भएको छ । कतार, युएई दुवई, कुवेत, साउदी लगायतका देशमा पनि ट्रेण्डिङमा पर्न सफल भएको छ ।
अहिले कुनै पनि प्रकारको भिडियो युटुबको ट्रेन्डिमा पर्‍यो भने त्यसले खास अर्थ राख्छ । किनकी, युटुबले नेपालमा पनि ट्रेन्डिङको सुरुवात गरेपछि अहिले भिडियो बनाउनेहरु आफ्नो सामाग्री कती हिट भैरहेको छ भनेर थाहा पाउन उत्सुक हुन्छन् ।
नेपाली मिडिया, इन्टरनेट माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निकै नै लोकप्रिय बनेका झापाका बालगायक अशोक दर्जी जसले कुनैबेला आफ्नो दैनिकीको लागी दिनभरी सडकमा गाउँथे ।तिनै दर्जी धेरै नेपालीले मन पराइए एकाएक भाईरल बने उनलाई नचिन्ने नेपाली नै कम होलान । बाल गायक दर्जीलाई चर्चित बनाउनुमा धेरैको हात छ । आम नेपालीले पनि देश तथा विदेशबाट त्यतिकै सहयोग गरेका छन । अशोकलाई यो हाइटसम्म पुर्याउनुमा धेरै देन भने अहिलेका नाम चलेका संगीतकार टंक बुढाथोकी, आरजे रुपकलाई नै बढी जस जान्छ भलै उनीहरुलाई पनि केहि आक्षपहरु त लगाउन खोजियो तर कर्म उनीहरुले छोडेनन ।
गायक तथा सङ्गीतकार टंक बुढाथोकी र अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू मिलेर अशोक दर्जीको घर निर्माण सम्पन्न गरे । घर निर्माण मात्रै गरेनन झापा दमकमा एक भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्दै अशोक दर्जीको परिवारलाई घर हस्तान्तरण पनि गरे । त्यस्तै अशोक दर्जीले पनि देश र विदेशमा गरेर थुप्रै ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन्।तिनै अशोक दर्जीको पहिलो गित ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ गीतले बजारमा निकै चर्चा पायो लाखौंको जिब्रोमा झुण्डिएको त्यो गित पछि अहिले अशोक दर्जी, एआर बुढाथोकी र टंक बुढाथोकी ३ जनाले स्वर दिएको निकै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत दोस्रो गित ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’ बोलको गित भर्खरै बजारमा आएको छ ।
गीतमा शब्द संगीत टंक बुढाथोकीले गरेका छन भने म्युजिक भिडियोको डाइरेक्सन चर्चित निर्देशक कविराज गहतराजले गरेका हुन । वृद्धाश्रमका आमाहरुको पिडा झल्काईएको छ भिडियोमा । आमा भन्दा राम्री कोहि छैन संसारमा भन्दै आमा प्रति समर्पित निकै मिठो पनि र भावुक पनि।
उक्त गीतको म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस ।
जीवनमा पहिलोपटक भजन गाएँ तर उमेर ढल्केको नसोच्नु होलाः गायक खरेल